I-La Semois et moi - I-villa ekhethekile emfuleni i-Semois - I-Airbnb
I-La Semois et moi - I-villa ekhethekile emfuleni i-Semois
Bouillon, Wallonie, i-Belgium
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Rudy
Jabulela ithala likanokusho ehlobo. Jabulela igumbi lokuhlala elithokomele ngaseziko ebusika, ukusuka endlini yokudlela noma ku-suite enkulu. Jabulela impilo yasebusuku ku-Semois ngenxa yokukhanya okuyingqayizivele.
I-'La Semois et moi' iyi-villa yase-Ardennes eyingqayizivele ehlala abantu abangu-6 esigodini esithule, esiluhlaza futhi esinezinkuni somfula i-Semois.
Unokufinyelela okuqondile emfuleni iSemois. Kusukela ethafeni, kusukela egumbini lokuphumula futhi kusukela emakamelweni okulala 2 ungakwazi ukujabulela amanzi agelezayo, amadada, amadada, izinhlanzi, kayakers .... Ukudoba ngqo kusuka engadini!
Ukuze siqhubeke sithuthukisa izinga lokuhlala kwakho, senze ukulungiswa okubanzi kusukela ekuqaleni kuka-2019. Sibheke ngabomvu ukukwamukela ku-villa evuselelwe ngokuphelele enendawo yokuhlala enkulu nevulekile, amagumbi okugezela amabili, ithala elibanzi, ikhishi lesimanje elibushelelezi. Ukusimama nakho kwakunamandla: ukucwebezela okuphindwe kabili, ukwahlukanisa phansi nophahla, ugesi omusha, ukufakwa kwamanzi nokushisisa, umshini ozishintshayo wasekhaya ukuze uphathwe ngendlela efanele.
Nge-inthanethi engenawaya endlini yonke kanye nasethaleni ungalalela umculo owuthandayo nge-TV noma nge-smartphone yakho ngohlelo lokusebenza lwe-Spotify. Sikunikeza ukunethezeka okukhulu: i-WiFi, ama-TV e-inthanethi (i-Netflix, i-Spotify, i-YouTube ...), isistimu yomsindo ye-SONOS, i-Proximus TV, umbhede owubukhazikhazi nelineni lokugeza, ilineni lasekhishini, ithala elifakwe ngokunethezeka, izoso yamalahle engashintshi.
Indawo yokuhlala evulekile inefenisha ngokujabulisayo futhi ekhangayo. Isitayela sesimanje esihlanganiswe nama-accents ajwayelekile e-Ardennes.
Ikhona le-TV lifakwe i-inthanethi ehlakaniphile ye-inthanethi ebanzi (enezinhlelo zokusebenza ezifana ne-Netflix, i-Spotify, i-YouTube, isiphequluli se-inthanethi ...), enohlelo oluzungezile lwe-SONOS, uxhumano lwe-USB, i-Proximus TV nomsakazo (Flemish, French, English, .. . Iziteshi ze-TV nerediyo).
Indawo yokudlela eseduze, nokho ehlukene inetafula eliyisikwele elihle elinezihlalo ezivulekile eziyisi-6 kuye kweziyisi-8 zesidlo sakusihlwa esimnandi.
Ikhishi elimhlophe elibushelelezi lifakwe konke ukunethezeka: ngaphezu kwezitsha, izibuko, amabhodwe namapani, kukhona umshini wokuwasha izitsha, ifriji, ifriji, isitofu segesi esinohhavini kanye ne-extractor, umenzi wekhofi & Senseo, i-toaster, iketela ne-microwave.
Umshini wokuwasha, umshini wokomisa i- tumble, ibhodi loku-ayina, i-ayina kanye nendawo yokomisa nakho kukhona onawo.
Ingadi exhumene ne-Semois nethala elikhulu ifakwe itafula labantu abangu-6, indawo yokuphumula, i-parasol kanye nemibhede yelanga emi-2. Amanethi anomthunzi enza ithala libe mnandi kakhulu. Ithala libiyelwe, ingadi ayikho. Kukhona ifenisha engadini eyengeziwe etholakalayo ongayifaka engadini. Ungasebenzisa isitsha somlilo. Kukhona i-charcoal barbecue engaguquki eduze nethala.
Indlu inamakamelo okulala amathathu, esewonke anabantu abayisithupha; imibhede yembozwe ngamaduvethi, imicamelo emi-2 kumuntu ngamunye nelineni elihle lombhede (imibhede engu-2 kanye nemibhede emi-2 yabantu abangabodwana). Amakamelo amabili afakwe i-inthanethi ehlakaniphile ye-TV (enezinhlelo zokusebenza ezifana ne-Netflix, Spotify, YouTube, isiphequluli se-inthanethi ...).
Kunamagumbi okugeza angu-2. Igumbi lokulala eliphansi linendawo yokugezela exhumayo enethoyilethi, usinki kanye neshawa yokuhamba. Esitezi sokuqala kunendlu yokugezela yesibili enendlu yangasese, indishi yokugezela kanye nenhlanganisela yeshawa yokugeza. Kunendlu yangasese yezivakashi phansi.
I-villa ishisiswe ukushisisa kwegesi okuphakathi, isitofu sokhuni esakhelwe ngaphakathi sinikeza imfudumalo eyengeziwe kanye nokukhululeka endaweni yokuhlala evulekile. Uphahla kanye ne-floor plate kufakwe i-insulated kakhulu, kukhona ukucwebezela okuphindwe kabili kuyo yonke indlu. Konke ukufakwa kwezobuchwepheshe kuvuselelwe ekuqaleni kuka-2019.
Ukupaka okuyimfihlo kwezimoto ezine, kukhona indawo yokushaja yemoto yakho kagesi.
Izilwane ezifuywayo AKUVUMELEKILE (inja encane ingavunyelwa ngokukhethekile ngemva kwesivumelwano esicacile).
I-villa itholakala ekujuleni kweBelgian Ardennes, emaphethelweni edolobhana elihle laseRochehaut (Bouillon), esigodini saseLaviot osebeni lweSemois. I-Rochehaut ikunikeza umbono owaziwayo wedolobhana elihlukanisiwe lase-Frahan, elisendaweni ezungezile ye-Semois.
I-Laviot iyidolobhana lase-Rochehaut elisendaweni ezungezile ye-Semois elokhu iguquguquka, phakathi kwemvelo emangalisayo ye-Luxembourg Ardennes.
Hhayi kuphela labo abafuna ukuzola futhi abafuna ukucwiliswa ezindaweni ezinhle ezimangalisayo bazoba sendaweni yabo e-Rochehaut, kodwa leli dolobhana futhi liyindawo ekahle yalabo abajabulela ukuhamba okushesha kanye nazo zonke izinhlobo zemidlalo.
Ngaphezu kwalokho, i-Rochehaut ithandwa kakhulu ngama-gourmets ngenxa yezitsha zesifunda ezisezingeni eliphezulu.
Ezindaweni eziseduze kukhona phakathi kwezinye. I-Rochehaut enombono wayo obi nge-Frahan (idolobhana elihlukaniswe ngokusonteka kwe-Semois), i-Bouillon, i-Alle, i-La-Vresse-Sur-Semois, i-Bohan ... amadolobhana afanele ukubonwa.
Idolobha lezitolo laseSedan eline-'chateau' yalo ngaphesheya komngcele waseFrance nalo liseduze. Idolobhana laseFrance le-champagne iReims lihamba ngehora le-1.5 ngemoto.
Hlola ezinye izinketho ezise- Bouillon namaphethelo